निको भएका व्यक्तिबाट कोरोना सर्छ? कसरी सचेत रहने? :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
नेपालमा ५७ जना कोरोना संक्रमितमध्ये १६ जना निको भएका छन्। उनीहरू आ-आफ्नो घरमा सतर्कता अपनाएर बसिरहेका छन्। निको भएका व्यक्तिबाट संक्रमण पुनः सर्ने हो कि भन्ने त्रास समेत कतिपयमा छ।
टेकु अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अनुप बास्तोला निको भएका व्यक्तिबाट कोरोना नसर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार २४ घण्टाभित्र दुईटा र्यालको नमूना नेगेटिभ आएर डिस्चार्ज गरेको व्यक्तिबाट पुनः संक्रमण सर्ने जोखिम हुन्न। 'निको भएका व्यक्तिहरू सामान्य रुपमा जिवनयापन गर्नसक्नुहुन्छ। उहाँहरूबाट अरूमा संक्रमण फैलिने खतरा हुन्न,' उनले भने।
डाक्टार बास्तोलाले बरु निको भएका व्यक्तिलाई अरूबाट पुनः संक्रमण सर्ने जोखिम हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने बताए। टेकु अस्पतालबाट पनि दुईजना कोरोना संक्रमित निको भएर घरमा छन्। उनले दुबै व्यक्तिलाई घरमा बस्दा सचेत रहन र आवश्यक परेमा अस्पतालमा सम्पर्क गर्न भनिएको बताए।
तीमध्ये काठमाडौंकी प्रसिद्धि श्रेष्ठले पनि आफू घरमा दुईहप्ताको लागि आइसोलेसनमा बसेको सुनाइन्। 'घरमा पनि म परिवारबाट अलग्गै बसिरहेको छु। डक्टरहरूको सल्लाह अनुसार १४ दिन छुट्टै बस्दैछु,' उनले भनिन्। कोरोनाबाट निको भएका व्यक्तिलाई पहिल्यैकै जीवनयापनमा फर्कन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बास्तोलाको आग्रह छ। उनले त्यस्ता व्यक्तिलाई विभेद गर्न नहुने बताए।
उनै बास्तोलासँग सेतोपाटीको कुराकानी गरेको भिडिओ -
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १७, २०७७, ०७:२०:००